Rabshado Sababay Dhimasho oo ka Dhashay Doorashada Kiiniya
Ugu yaraan saddex qof ayaa la dilay kadib qalalaasaha ka dhashay doorashadii Kiiniya markii uu Hoggaamiyaha mucaaridka Kiiniya Raila Odinga uu sheegay in la jabsadey habkii elegtarooniga ahaa ee komishanka doorashada si la isku daba mariyo natiijada doorashada.
Waxa uu ku gacmo seydhay natiijada hordhaca ee doorashadii salaasadii oo muujisay in uu si aad ah ugu horeeyo madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Arrintaasi ayaa keentay in ay qarxaan rabshado dhimasho sababay inkasta oo siyaasiyiiintu ku baaqayaan in la is dejiyo.
Guddoomiyaha doorashada ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo habka doorashada, balse la baadhi doono eedeyntaasi hoggaamiyaha mucaaridka.
Laba qof ayaa la sheegayaa inuu ku dhintay isku dhac ku dhexmarey booliska iyo dad bannaanbaxayay magaalada Neyrobi. Haalka hal qofna lagu dilay magaalada South Mugirango.
Booliska ayaa sida oo kale tacshiirado ku furey taageerayaasha mucaaridka oo isugu soo baxay magaalada ku taal galbeedka ee Kisumu, halkaasi oo mucaaridku ku badan yihiin.
Waxa uu sheegey in natiijooyinka hadda la soo gudbiyey aysan ahayn kuwa rasmi ah, kuwa rasmigana ay yihiin kuwa ku qoran foomamka gacanta ku qoran ee laga soo gudbin doono goobaha codka laga dhiibtey.
Mar wax laga weeydiiyey eedeynta hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee ah in la jabsaday habka electaroonika ee guddiga, kadibna lagu shubtey codadka ayaa waxa uu yidhi “Waan baadhi doonaa sheegashaadaasi, balse hadda waxbo kama odhan karo”.
Wasiirka amniga guddaha Fred Matiang’I ayaa sheegey in laga yaabo in ay xanibaad ku sameeyaan isticmaalka baraha bulshada oo la aaminsanyahay in ay yihiin meelaha laga huriyo rabshadaha.
Mr Odinga ayaa saxaafada u sheegay in natiijada ka soo baxaysa doorashada ay tahay”mid been abuur ah”,sababtoo ah buu yiri lama keenin dikumiintiyo cadaynaya natiijada
Guddiga doorashada Kenya ayaa waxa ay sheegeen in boqolkiiba 96.83 codadka la tiriyay uu Mr Kenyatta uu ku hogaminayo 54.5 boqolkiiba, halka Mr Odinga uu haysto boqolkiiba 44.8.
Chibokati guddoomiyaha IEBC
Mucaaradka ayaa natiijada la baahiyay ku tilmaamay been abuur sabtoo ah natiijada ma wehelin foomamka xarumaha codaynta ee loo yaqaano foom 34A iyo 34B.
Madaxeynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in muran kasta oo ku xeeran doorashada loo xaliyo si nabad ah, iyada oo loo marayo hey’adaha waddanka iyo sharcigaba
Dadka Kenyanka ah ayaa waxa ay u codeeyeen 6 jago laga soo billaabo madaxwaynaha ilaa golaha wakiilada degmooyinka.